Fiofanana Dredge sy fanofanana fiarovana - Ellicott Dredges
Fandaharan'asa fanofanana Dredge
Ny mpiofana amin'ny fandotoana dia manakarama ireo mpiasan'ny vondron-javatra voaofana tsara mba hampandehanana ny diany. Ellicott Dredges, iray amin'ireo mpamokatra dredge mahomby indrindra eto an-tany, dia manolotra fandaharam-be fanofanana madiodio. Ny lalam-piofanana omena dia mifanaraka amin'ny karazana fitaovana fandevenana ny mpandray anjara ary ny zavatra takian'ny mpanjifa.
Ny mpandray anjara mahazatra dia misy tompona dredge, mpandraharaha, mpiasan'ny fikolokoloana, ary mpiasa mpanara-maso izay miasa amin'ny indostrian'ny dredging. Ny fiofanana dia atolotray amin'ny toerana misy anay any Baltimore, Maryland (USA), ary New Richmond, Wisconsin (Etazonia) ary manana simulator dredge mandroso indrindra ao amin'ny indostrianay. Manome fiofanana eo an-toerana sy an-toerana koa izahay na aiza na aiza eto amin'izao tontolo izao.
Ny fandaharam-potoanantsika dia misy ny fampiofanana an-dakilasy, ny fampiofanana simulator, ny famahana olana ary ny fandidiana voalohany amin'ny dredge Ellicott®.
Fiofanana an-dakilasy amin'ny fiarovana fototra, ny fandidiana ary ny fikojakojana
Manolotra atrikasa fiofanana amin'ireto faritra manaraka ireto izahay:
1. Fiofanana fiarovana Dredge
2. Fikojakozan'ny Dredge
3. Fototry ny Dredge fototra ho an'ireo vao manomboka
4. Advanced fampiofanana momba ny Dredge ho an'ny mpandraharaha Dredge za-draharaha
5. Dredgepack® program- (novolavolain'i Hypack, orinasa marika Xylem)
Fiofanana Dredge Simulator
Ny fotoam-piofanana momba ny fampiofanana simulator ataontsika dia natao hamerenana ny fomba fijery tena izy avy amin'ny fomba fijerin'ny mpandraharaha ao anaty efitrano fifehezana. Ny simulator dia manome traikefa feno iray izay mamela ny mpandraharaha hahafantatra tsara ny tenany amin'ny fitaovana, ary hianatra ny fomba fampandehanana tsara ny dredge.
1. Diagnosis rafitra
2. Fahatakarana diagram elektronika
3. Ahoana ny fomba hamakafaka sy ny fitaovana fitsapana
4. Fiofanana famerenana amin'ny fampiasana mety tsara
Tsidiho ny Tetikasa Dredge eo an-toerana
Ireo mpandray anjara dia hanana fahafahana hahita traikefa mivantana ny fandidiana ny Ellicott 370 na 670 Dragon® dredge (misy ny fitsipika dia mitovy amin'ny dredges kely kokoa amin'ny 1270, 1870, na 2070 dredges ary ao anatin'ny halaviran'ny fiara).